Ciidamada Uganda Ee Soomaaliya Jooga oo Ka Cabanaya Mushaar La’aan. – Shabakadda Amiirnuur
August 24, 2019 6:33 am by admin Views: 318
Ciidamada Uganda ee qeybta ka ah shisheeyaha kusoo duulay dalka Soomaaliya oo ay DF-ka ugu yeerto iney nabad ilaaliyaal yihiin, dowladdoodana ku sheegto iney yihiin ciidanka Difaaca Uganda “UPDF” ayaa ka qeyla dhaamiyay mushaar la’aan waqti dheer ah.
Wargeyska kasoo baxay dalkaas ee New Vision oo soo xiganaya saraakiil ka tirsan ciidanka ayaa sheegay in cabashadu la xiriirto mushaar la’aan muddo 7 bilood oo xiriir ahi.
“Isku darka lacagta guud ee ka maqan ciidamada Uganda waxay gaareysaa 52 Billion ee Shillinka Uganda ah” ayaa qoray wargeysku.
Ma uusan sheegin sababaha rasmiga ah ee ka dambeeya in ciidanku heli waayaan mushaaraadkooda, balse waxay xuseen iney wadaan baaritaan.
Dowladaha Mareykanka iyo kuwa Yurub ayaa ciidamada shisheeye keensaday dalka Soomaaliya iyagoo food saare uga dhigay magaca Amisom, waxaana siyaasiyiin badan ay mushaar la’aanta la xiriirinayaan dhaqaala darri soo wajahday dalalkaas.
Askartan ayaa waxaa mushaar la’aanta u dheer dagaallo joogto ah oo ay kala kulmaan ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab.
Ciidanka Uganda oo kaliya ma ahan kuwa mushaar la’aantu heysato, balse waxaa lamid ah Xabashida, Burundi iyo Jabuutiyaanka. Laakin Xabashidu waxay aaminsan yihiin iney iyagu xaqiijinayaah ahdaaf uga weyn mushaaraadka oo ah iney gacanta ku dhigaan xeebaha dalka Soomaaliya, maadaama madaxweynaha DF uu u saxiixay afar dekedood.